क्यानडामा गाडीको ठक्करले एक बालकको मृत्यु « गोर्खाली खबर डटकम
क्यानडामा गाडीको ठक्करले एक बालकको मृत्यु
। टोरन्टोको इटोविकोमा भएको सडक दुर्घटनामा एकजना नेपाली बालकको ज्यान गएको छ । मंगलबार घटेको दुर्घटनामा क्यानाडामा बसोबास गरिरहेका रमेश भट्टराई र सबिना पाठकका तीन वर्षीय छोरा रायनको मृत्यु भएको हो । चितवनको माडी घर भएका रमेशको परिवार चार वर्षअघि क्यानाडा आएको थियो ।
दुर्घटनामा ३६ वर्षीय रमेश र उनकी सात वर्षीया छोरी सारा सामान्य घाइते भएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरुको उपचार भइरहेको टोरन्टो प्रहरीले जनाएको छ । सामान्य घाइते रमेश उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । पेट र खुट्टामा चोट लागेकी उनकी छोरीको ‘सिक किड हस्पिटल’ को आकस्मिक विभागका उपचार भइरहेको एनआरएनए क्यानाडाका महासचिव पिताम्बर भट्टराईले बताए ।
टोरन्टो प्रहरीका अनुसार रमेश आफ्ना छोराछोरीसहित सडक पार गर्ने क्रममा थिए । त्यही बेला उनीहरुलाई गाडीले ठक्कर दिएको थियो । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह भइरहेको छ । ठक्कर दिने गाडीका चालक पनि घाइते भएको जनाइएको छ । एकजना वृद्धाले गाडी गाडी चलाइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु, वडा अध्यक्ष सहित १८ घाइते
एका बिहानै आयो दुखद खबर : चिसापानी पुलबाट तीन विद्यार्थीले एकैपटक हा मफा ले, एक जना बेपत्ता
यी नै हुन् हिजो बसले हिजो ठक्कर दिंदा कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाएका सञ्जय !
अचम्म ले घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो हेर्नुहोस्?
यी हुन् ग्या’स्ट्रिक च्वा’ट पार्ने ६ घ’रेलु उपा’य, घरमै बसिबसी यसरि गर्नुस उपचार ,